Indawo yokugcina ubungqina - Iphepha le-2 le2-NJ & NY yearhente yeZindlu, uMkhenketha, uKhuselo loBhengezo kunye namaGqwetha okuBhengeza
ikhaya / baqinisekiswa / Page 2 (Page 2)
UDavis Themserither - Uphengululo lukaGoogle
Olu hlaziyo lunga-Derek Soltis - ndingumnini wepropathi kwi-NYC kwaye ndaba nomba wokuvezwa kwezinto ngaphambili kwisakhiwo esinye sezakhiwo zam. Ngomnxeba, Mnumzana Soltis undinike isikhokelo sokusombulula le ngxaki ngaphandle kokumqesha njengegqwetha. Inkqubo yayiqondile kodwa yayingaziwa ndim. Ngengcebiso kaDerek, ndakwazi ukujongana nalo mbandela. Uthathe ixesha ukundifundisa ngokufutshane “ngenkqubo” kwaye wandibonisa indlela elungileyo. Ndiyayihlonipha into yokuba uMnu Soltis endincedisile isikhokelo kwaye khange ndicele ntlawulo nangona ibilixesha lokuqala ukuthetha nam. Olu luphawu lobuchwephesha bokwenyani. Andizukuthandabuza ukunxibelelana noDerek Soltis kwixa elizayo ukuze andimelele kwimiba yezomthetho. Uphengululo lukaGoogle
Oku kuyafana nesinye isithuba sam. UPatel Soltis kunye noCardenas basebenze nam iminyaka eyi-2 ukufumana uguquko lwemali mboleko. Kwakuyinto yokukhwela erhasi. Ndilahlekelwe ngumsebenzi ngexesha lenkqubo, ukugxotha abaqeshi, ukujamelana nentengiso ye-sheriff kwaye i-3 yangaphambili yemali mboleko ebolekayo. Phantse kwafuneka ndifake ukubhengezwa njengongenamali, kodwa uMnu Cardenas wasebenza egameni lam ukuze andigcine ekhaya. Undihambile ngayo yonke imiba yam kwaye wakwazi nokundixelela ukuba kutheni iimodyls zam zangaphambili zemalimboleko zisilela. Ndibabulela ngokusuka emazantsi entliziyo yam. Banazo iindawo ezininzi kwaye ndifuna wonke umntu azi ukuba bandincede njani. Uphengululo lukaGoogle.
UNicholas Martineau - Uhlaziyo lukaGoogle
Ngobungcali kakhulu, ngokunyaniseka kakhulu. Ndonwabe kakhulu ndadibana noDerek ovela kuPatel kunye neeSolits. Uyithetha ukuba injani, iyenza ibe lula kakhulu. Uphengululo lukaGoogle
UJessica Torrente - Uphengululo lukaGoogle
Andinanto ngaphandle kwezinto ezinkulu zokuthetha malunga neQela lasePatel noSoltis. Umnumzana Patel, Mnu. Soltis kunye no Mnu. Cardenas liqela lamaphupha. Bancedile mna nomyeni wam sathenga indlu yethu (intengiso emfutshane) kwaye babephendula kwaye besixhasa kuyo yonke le nkqubo. Cebisa ngaphandle kokubhuka. - Uphengululo lukaGoogle
UNick T. - KwiYelp
Ndingumntu ocaphukisayo, ukutsho nje okuncinci. Ikhaya lam laliza kuthengisa koonontlalontle kwiveki enye kwaye bendingenalo igqwetha emva kokuba iipakethi ezininzi zokuguqula zingalunganga. Lonke igqwetha endidibene nalo landixelela ukuba inketho zam zonke yayikukugcwalisa ngokuchithwa kwamatyala into endithandabuza ukuyenza Ndifikele kuPatel noSoltis kwaye ndidibene noVeer noLazaro ababeke kwangoko iingqondo zam kwaye bandixelela ukuba ndingafaki nmali kwaye banokuqiniseka ukuba siza kulufumana utshintsho esilufunayo.
Bahambe bandilwela mna kwaye ukuthengiswa kwesheriff kwahlehliswa kaninzi bandifumanela ukuguqulwa kwaye ngoku imali mboleko yam iphantsi kunokuba yayinjalo ngaphambi kokuba yonke inkqubo ibonakale. Ukuba unexhala lokuphulukana nekhaya lakho elinokuthi loyike ngakumbi, yoyikisela ngoku, aba bantu banokukunceda!
Ndidibene nabo ngoJuni 30th ukuqala inkqubo kwaye namhlanje, kwiinyanga ze9 kamva ndatyikitya amaxwebhu okuguqula. Ngekhe ndikwenze oku ngaphandle koncedo lwabo! Baye bandinika okungaphezulu nje komsebenzi wasemthethweni, bandinika uxolo lwengqondo, imvakalelo yokhuseleko lokuba ngumnini khaya, nentuthuzelo kuyo yonke inkqubo! IIMBONO ezininzi kuLazaro Cardenas nakuMnumzanaPatel, abasokuze bazi ukuba bandenzele ntoni !!